NGC 5247 - ဝီကီပီးဒီးယား
Image of NGC 5247
13° 38′ 03.040″
NGC 5247 သည် ဗာဂိုး ကြယ်စုတန်းမှ အလင်းနှစ် ၆၀ မီလီယံ ကွာဝေးသော ခရုပတ်ပုံစံ ဂလက်ဆီဖြစ်ပြီး ဂလက်ဆီ ကတ်သလောက်စာရင်းတွင် Diceros Virginis ဟုခေါ်သည်။ ယင်းသည် နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီပါဝင်သည့် Virgo Supercluster နှင့် သက်ဆိုင်ကာ အခြား ဂလက်ဆီများနှင့် ဆက်နွယ်ခြင်း မတွေ့ရပေ။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ NASA/IPAC Extragalactic Database။ Results for NGC 5247။ 2007-04-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Crook၊ Aidan C.; et al. (February 2007)၊ "Groups of Galaxies in the Two Micron All Sky Redshift Survey"၊ The Astrophysical Journal၊ 655: 790–813၊ arXiv:astro-ph/0610732၊ Bibcode:2007ApJ...655..790C၊ doi:10.1086/510201.
↑ Khoperskov၊ S. A.; et al. (December 2012)၊ "Global gravitationally organized spiral waves and the structure of NGC 5247"၊ The Astrophysical Journal၊ 427 (3): 1983–1993၊ arXiv:1209.2879၊ Bibcode:2012MNRAS.427.1983K၊ doi:10.1111/j.1365-2966.2012.22031.x.
ကိုဩဒိနိတ်: 13h 38m 03s, −17° 53′ 03″
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=NGC_5247&oldid=370614" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဇွန် ၂၀၁၇၊ ၀၈:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။